Ndenye aha na usoro njikwa: CheddarGetter | Martech Zone
Usoro Ndenye aha na ndenye aha: CheddarGetter
Izu a ka m ga-etinye oge na otu na Ogwe, ihe ịtụnanya teknụzụ incubator na Bloomington, Indiana. Ọ bụ ụfọdụ ndị mmepe ọkachamara bidoro Sproutbox bụ ndị kpebiri ihe ha hụrụ n’anya na ihe ha masịrị ya na-ewere echiche wee weta ya n’ahịa dị ka ihe ngwọta. Ha na-eme nke ahụ maka ịha nhatanha na ọrụ ha kpebiri ịga ahịa.
Agara m taa dịka onye ikpeazụ na-esote ha Na-agbaOru ngo ha kpebiri iweta n'ahịa ọzọ. Lee ohere dị egwu na mmemme - ya na ndị bịara ya na ndị ọka ikpe si n'akụkụ ụwa niile. N'ime izu ndị na-abịanụ, m ga-ekpuchi ọtụtụ mmalite nke Sproutbox… ọtụtụ ga-ejikwa teknụzụ rụọ ụfọdụ na azụmaahịa.
Otu n'ime ihe ịga nke ọma nke Sproutbox bụ Chiedozie. N’agbanyeghi na abughi m nnukwu mmasi nke ika (ndo Sproutbox :)), ngwa ahia di elu. CheddarGetter na-enye ohere ka azụmaahịa nwere ụdị ego ha na - enweta na - agwakota ha ọnụ, soro ma kwụọ ndị ahịa ha ụgwọ.
Ndepụta nke njirimara karịrị uru nke ọrụ ahụ. Ọnụahịa nke ọrụ ahụ dị oke mma ebe ọ bụ na CheddarGetter bụ nke kwekọrọ na… mana ha na-enye ndị ahịa ha ngwa siri ike na ọnụọgụ ego nke ndị asọmpi ndị ọzọ.
CheddarGetter bụ “nkwụnye ma kpọọ” izizi ndenye aha na usoro ịgba ụgwọ. Ma ị na-azụ ahịa SaaS dị elu ma ọ bụ obere azụmaahịa, ọrụ dabere na ọrụ, Cheddar Getter bụ ụzọ zuru oke iji soro ma kwụọ ndị ahịa gị ụgwọ. Nanị tinye nzere akaụntụ ahịa gị, na Cheddar Getter ga-amalite ịgba ndị ahịa gị ụgwọ ozugbo. Site na Chiedozie saịtị.
Offọdụ n'ime atụmatụ ndị ahụ gụnyere ịgba ụgwọ micro, ịkwụ ụgwọ micro, kwakọta mkpokọta, mmachi ojiji dị nro, ụgwọ ojiji, ụgwọ oke, atụmatụ ọnụahịa, ọnụahịa la carte, tinye-ons, inye onyinye ugboro ugboro, ego, ụgwọ kredit, nnweta dị ụkọ ịnye ọnụahịa, akpaghị aka ịgba ụgwọ, priceinginging, ụgwọ ịgba ụgwọ ugboro mmezi… ndepụta na-aga n'ihu.
Iji bido, enwere ezumike API ndị na-ede akwụkwọ edepụtara maka PHP na Ruby iji tinye usoro ha ngwa ngwa na weebụsaịtị gị, ọrụ ebere gị ma ọ bụ sọftụwia dị ka Ọrụ.
Tags: b2b onye na-azụ ahịacadillacndenye aha emailasọmpi n'ịntanetịnnyocha afọ ojujuịdenye ahaasọmpi weebụ
Akụkụ na ndị ahịa gị
Oge mmekorita Usoro na Squad
Dee 19, 2009 na 11: 19 AM
Agara m SproutBox izu ole na ole gara aga, ọ bụghị n'ihi na m nwere ngwanrọ ngwanrọ, mana n'ihi na ihe nlereanya ha masịrị m. Ọ bụ ụzọ dị egwu! Ahụkwara m ebe obibi okike n'anya nke ha mepụtara.
Dec 19, 2009 na 2:34 PM
Jon, n'ezie, ọ bụ ụzọ dị elu nke teknụzụ na isi ike ike ike ọchịchị! Ahụla m ọtụtụ ụlọ ọrụ na-atụfu ego itinye ego na mmepe ọjọọ maka na ha amaghị ihe ha na-eme. Nke a na - ewepu ọtụtụ ihe egwu ahụ!
Jun 9, 2011 na 7: 11 PM
Ndewo Douglas -
Daalụ maka nnukwu nyocha! N'ime oge a kemgbe ịdechara nke a, anyị agafeela ị gbakwunye ọbụna atụmatụ ndị ọzọ na CheddarGetter, gụnyere mwekota PayPal, ọkachamara Ọkachamara Quickstart, ibe akwụmụgwọ akwụ ụgwọ, na ndị ọzọ! Ọbụna anyị nwere atụmatụ ọnụahịa ọhụrụ abụọ: atụmatụ mbido anyị maka $ 9 / mo, yana atụmatụ Blowing Up maka $ 79 / mo. Akụkụ kachasị mma banyere atụmatụ ndị a bụ na enyere gị aka azụmaahịa na ndị ahịa na - akparaghị ókè: ihe dị iche na atụmatụ ahụ bụ ego ole ị na - enweta, yana atụmatụ ị ga - achọ. Nwere ike ịlele nkọwa niile nke atụmatụ ọnụahịa ebe a: http://blog.cheddargetter.com/post/4211900640/new-pricing-plans.